XOG: Ardaydii ugu badnaa ee Gobalka Mudug Puntland oo iska diwaangaliyey Dugsiyada Waxbarashada DF hoos-yimaada ee kafuran Gaalkacyo.
February 5, 2020 NEWS 9
GAALKACYO(P-TIMES) – Afartii bilood ee lasoo dhaafay muranka ku saleysan xagga waxbarashada ee u dhaxeeya Puntland & Wasaaradda Waxbarashada Federaalka ayaa sabab u noqday in ay niyadjab waxbarasho la kulmaan Ardayda dugsiyada Sare ee Puntland oo aad ugu han weynaa in ay heli doonaan Shahaadooyinkooda heer Federaal, marka ay dhameystaan fasalka 4aad ee Dugsiga Sare, si ay u helaan Waxbarasho jaamacadeed.
Inkastoo ay xaaladu xumaatay maalmihii u dambeeyey ayna qadiyadan qeyb ka noqdeen shaqsiyaad si weyn aysan u jeclaysan Shacabka Soomaaliyeed hadaladooda, haddana waxaa soo baxaya walaaca ay qabaan Waalidiinta Puntland oo ka welwelsan Mustaqbalka ubadkooda oo ay mudo dheer dhaqaale iyo waqti kusoo bixinayeen.
Warsidaha PuntlandTimes ayaa ogaaday in Dugsiyada Waxbarashada ee gobalka Mudug ay noqdeen kuwii ugu horeeyey ee la kulmay dhabarjabka Ardaydooda, gaar ahaana markii ay in ka badan 170 Arday ka tageen Waxbarashada Dugsiyada Sare ee kuyaala Waqooyiga Gaalkacyo, iskana diwaangaliyeen Dugsiyo Waxbarasho oo hoostaga dawladda Faderaalka, kuna isla gudaha magaaladaas.
Maamulayasha Dugsiyada Sare ee Puntland qaar kamid ah oo ka gaabsaday magacyadooda ayaa noo xaqiijiyey in Ardayda ilaa hadda ka bedelatay labo dugsi Sare oo kuyaala Gaalkacyo ay gaarayaan 178 Arday, kuwaas oo iska diwangaliyey Dugsiga lagu magacaabo Mudug Sare oo isagu hoostaga Wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliya.
Qaar kamid ah Ardayda badalatay ayaa sheegay in ay walaac ka muujiyeen hab-dhaqanka isku tuur-tuurka ah oo ay galeen Ardaydii ka horeysay, taas awgeedna ay go`aansadeen in ay galaan Shahaado aan muran laheyn oo ay galaan Imtixaanka Federaalka, waxayna walaac ka muujiyeen in ay heli waayaan Dugsiyadoodii Waxbarasho.
Waalidinta Ubadkan ayaa labo maalin ka hor la kulmay Guddoonka Waxbarashada ee gobalka Mudug oo ay kala hadleen arrimahan, waxaana muuqatay in labada dhinacba aysan isku fahmin habka ay wax ku socdaan, waxaana Waalidiintu ay soo gudbiyeen walaaca ay ka qabaan in ay Ardaydoodu shahaadada heli waayaan, muranka socdana uu sii xoogeysto.
Dadka beenta ka daah,caade qaatayahow.
Ma lacagtii N&N ayaa ku soo gaartay?
Ka daah bulshada ku akhrista beenta aad qoraysis iyo jaahwareerka joogtada ah.
Sumcadana ha iska halayn.
Dear brother, your only job you do for somali media is to give Puntland hate, hate is not way forward for life,we need love. Thank you
SH Buli says:
Ha biqlayso. Sxbb Maxaa Pl kaa galay, pl hadal ku burburimayso ee lacagtaada iska qaado, oo kuf Pl, NN lacag way dhiibaysaa hadii aad Pl iyo macaaridka aad ku tuftid.
waakaaa waaka hhe wakaa wakaa hee , this is for africa
Waa sida uu jecel yahay, nacaskaas meesha wax ku qoray, dabadhilif.
Salan sare madaxtoyadii Dani iyo umada puntland baa iskaka qaldamay saxiibka meshan masulka ka ahoow.. Dani waa tagayaa puntlandi waa jireysaa. Waxyaalaha aadka u foosha xun de aad qoreyso ka waantoo magacaagana illasho waa ku hanweyneyne salan sare sxb
War waa ninkaan Abdwali la baxay.
War heedhe inta magac badan yahay maxaad ula baxday Abdiwali. Ma maangaabnimo iyo mu’alif la’aan ayaa kuu geysey????. An kula taliyo oo waxaad la baxdaa Abdi-Dameer
Waa in albaabada loo xiro dugsiyada laga leeyahay xamar ee puntland ka dhisan, oo uu Deni si toos ah uga baxo hoos imaanshaha federaal ku sheega. Hadii uu Deni ku dhicin in uu saas sameeyo waan in uu ‘”Barre Huuraale” amarkiisa qaataa.
Dhalinyarada habartaan sida loo diido maamulgoboleed daneeysta ah qaran Rabin gakadaha kadaya
Cabdullahi muuse says:
Gaalkacyo waa hooyada Puntland. Puntland hinnaaso iyo cadaawad midna ku burburi mayso. Orda oo caradiina iyo cuqdadiina la dhinta. Dadka maanta leh Gaalkacyo ayaa Puntland ka jeedsatay waa isla kuwii shalay lahaa Garoowe ayaa Puntland ka jeedsatay markii Gaas meesha joogey. Maantana Deni ayaa jooga marka Gaalkacyo ayaa jeedsatay.
Ari boowe aa la tahay. Nin waliba wuxuu yahay ayuu ku moodaa. Reer Gaalkacyo waa dad garaad iyo garashoba Alle siiyey, Puntland iyaga ayaa dhistay, afkiinana waxba kuma yeeli kartaan, uurka inaad ka bugtaanna waad muujiseen.
Qabri ayaa idin daweyn kara.